के चीनले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या लुकाएकाे थियाे ? वुहानबाट बाहिरियाे यस्ताे नयाँ तथ्यांक — Imandarmedia.com
के चीनले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या लुकाएकाे थियाे ? वुहानबाट बाहिरियाे यस्ताे नयाँ तथ्यांक
बेइजिङ । अमेरिका र भारतले केहि समय अगाडि चीनमाथि एउटा आरोप लगाए । त्याे आरोप थियो चीनले काेराेनाबाट ज्यान गुमाउने नागरिककाे यकिन तथ्याङ्क र बिवरण सहि नदिएको । यस बिषयमा चीनले कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएको थिएन । तर यता चिनियाँ अधिकारीहरुले कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) बाट मृत्यु हुनेको संख्यामा शुक्रबार संशोधन गरेका छन् ।
शुक्रबार चिनियाँ अधिकारीहरुले वुहानमा मृत्यु हुनेको संख्यामा परिमार्जन गर्दै एक हजार २ सय ९० जना थप गरेको छ। परिमार्जन गरिएको तथ्यांकसहित वुहानमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार ८ सय ६९ पुगेको छ।
साथै चिनियाँ अधिकारीहरुले संक्रमितको संख्यामा परिमार्जन गर्दै ३२५ जना थप गरेको छ। शुक्रबार बिहानसम्म वुहानमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ५० हजार ३ सय ३३ पुगेको चिनियाँ अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। चिनियाँ अधिकारीहरुले ‘इतिहास र पीडितप्रतिको जबाफदेहिता’ देखाउँदै तथ्यांक परिमार्जन गरिएको बताएका छन्।
किन सच्याइयो तथ्यांक?
चिनियाँ अधिकारीका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणको सुरुवाति दिनमा केही व्यक्तिको घरमै मृत्यु भएकाले संख्या छुटेको हो। त्यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न चिकित्सक तथा अधिकारीहरु केन्द्रित भएकाले मृत्यु हुनेको तथ्यांक छुट्न पुगेको चिनियाँ अधिकारी स्पष्टीकरण दिएका छन्।
त्यस्तै कोरोना भाइरसको महामारीका बेला केही गलत र दोहोरिएका रिपोर्टिङले पनि सही संख्या नआएको चिनियाँ अधिकारीले दाबी गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने र मृतकको संख्या पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत नगरेको आरोप लगाइरहेका बेला चीनले तथ्यांक सच्याएको हो।
परिमार्जित तथ्यांकअनुसार शुक्रबार बिहानसम्म चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ हजार ६ सय ३६ पुगेको छ। त्यस्तै संक्रमितको संख्या ८३ हजार ७ सय ५३ रहेको छ। त्यस्तै संक्रमितमध्ये ७७ हजार ५ सय ३ जना निको भएको पनि चिनियाँ अधिकारीले जनाएका छन्।
चीनको अर्थतन्त्रमा शताब्दी यताकै गिरावट
चीनको अर्थतन्त्रमा शताब्दी यताकै गिरावट आएको छ । शुक्रबार( आज ) सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा चिनियाँ अर्थतन्त्रमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले गिरावट आएको हो । शुक्रबार चीन सरकारले एक तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा जीडीपीमा गिरावट आएको जानकारी दिएको हो ।
गत वर्षको सोही अवधिमा वृद्धिदर ६ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण चिनियाँ अर्थतन्त्र सन् १९९२ पछि पहिलोपटक खुम्चिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएकाछन् । कोरोना महामारीको केन्द्र बनेको चीनमा अधिकांश उद्योग कलकारखा बन्द गरिएको थियो ।
विगत दुई दशकयता चीनको आर्थिक वृद्धिदर औसत नौ प्रतिशतले बढेको थियो । पिपुल्स डेलीले चीनले ल्याएको आर्थिक सहायताकार्यक्रमले मुलुकको आन्तरिक माग बढाउने बताएको थियो । तर चिनियाँ निर्यात भने प्रभावित छ ।
विश्लेषकहरुले चिनियाँ अर्थतन्त्रमा छिटै सुधार आउने सम्भावना कम बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले चिनियाँ अर्थतन्त्रमा एक दशमलव २ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ ।